Axmed Madoobe oo Shuruudo adeg hor-dhigay Siyaasiyiin uu xiray | Allmareeg Online
Home Wararka Maanta Axmed Madoobe oo Shuruudo adeg hor-dhigay Siyaasiyiin uu xiray
Warar lagu kalsoonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in Magaalada Kismaayo lagu xiray Siyaasiyiin siweyn uga soo horjeeda Madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe,kuwaasi oo kamid ahaa Guddiga Isbedel doonka Jubbaland.
Siyaasiyiinta la xiray ayaa waxaa la tilmaamay in qaarkood sii deyntooda lagu xiray Shuruudo dhowr ah,isla markaana uu amarkaas bixiyay Madaxweyne Axmed Madoobe.
Qaar ka mid ah Ehelada siyaasiyiinta iyo Waxgaradka u xiran Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu fashilmay isku day dhowr ah oo ay ku doonayaan in Axmed Madoobe kaga dhaadhiciyo in ragaasi lagu sii daayo,balse shuruud adag uu hordhigay.
” Haddii aan dooneysaan inaan sii daayo raggaasi,waa iney marka hore ka tanaasulaan qorshahooda isbedel doonka,islamarkaana aqbalaan nidaamka hadda Jubbaland ka jira,inta ka horeysa waxaan isugu nimaano waa qalad,” ayuu ku yiri Axmed Madoobe.
Xaalka Kismaayo ayaa maalmihii dambe wanaagsaneyn waxaana buux dhaafiyay Ciidamo hab beeleed u abaabulan oo kala taabacsan dhinacyada isku haya Jubbaland.
Previous articleDaawo Sawirro:-Duqa Muqdisho oo la kulmay Wakiilka QM ee Soomaaliya
Next articleDAAWO SAWIRRO:-Shirweyne Xasaasi ah oo ka furmay Baydhabo
Ex Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul kaga soo horjeestay midoowga...
Aways Geedi - November 21, 2018 0
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kasoo horjeestay Ololaha dowladda Soomaaliya ay waddo ee ku aadan Hanaan goboleedka dalalka geeska Afrika ee...